Naya Bikalpa | हामीले टेबुलबाट नै यो समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ - Naya Bikalpa हामीले टेबुलबाट नै यो समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ - Naya Bikalpa
हामीले टेबुलबाट नै यो समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ
प्रकाशित मिती: २०७६ कार्तिक २५, ०७: ०६: ११
नेकपाका नेता एवम् पूर्व श्रम तथा रोजगार मन्त्री
हालै छिमेकी राष्ट्र भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको भूमी कालापनी र लिपुलेक पनि भारतको नक्साभित्र परेपछि नेपालमा राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ । यसका विरुद्धमा नेपालका विभिन्न दलका नेता, कार्यकर्ता, भातृसंस्थाहरुले विरोधका स्वरहरु आउन थालेका छन् ।
भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको भूमि नपरेको प्रतिक्रिया दिएपनि नक्सामा भने लिपुलेक र कालापानी परेको देखाइएको छ । यता सरकार भने उक्त नक्साको बारेमा राजनीतिक दलहरुसँग छलफलमा जुटेपनि आधिकारिक धारणा भने प्रकट गर्न सकेको छैन ।
नेपालकै भूमी कालापानीमा भारतले लामो समयदेखि भारतीय सेनाको अस्थायी व्यारेक राखेको विरोधमा कयौं पटक नेपालका राजनीतिक दलका संगठनहरुले प्रदशर्न गरे ।
तत्कालिन नेकपा (माले) राजनीतिक दलहरुले उक्त क्षेत्रको व्यापक रुपमा विरोध गरेर हतियार प्रदर्शन गरेका थिए । तत्कालिन पार्टीका केही नेताहरु हाल सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । यिनै विवषयलाई लिएर हाम्रा संवाददाता ऋषि धमलाले नेकपाका नेता एवम् पूर्व श्रम तथा रोजगार मन्त्री लेखराज भट्टसँग नयाँ बिकल्प साप्ताहिकका लागि गरेका कुराकानीको सम्पादीत अंशः
कालापानी, लिपुलेक सिमा समस्याको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाट कसरी होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
कालापानीको समस्या अहिलेदेखिको होइन । लामो समयदेखि कालापानी बल्झेको छ र नेपाली जनताले बारम्बार कालापानीको बारेमा, लिपुलेकको बारेमा बहस चलाउँदै आएका छन् । यो हाम्रो हो र यसको भारतसँग बसेर निकास निकाल्नुपर्छ, वार्ता गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ । यसमा हामी कहिन कहि चुकेका छौं भन्ने लाग्छ ।
तपाईले भनेजस्तै कालापानी र लिपुलेकको बारेमा के मा र कहाँ कसरी चुक्यौ हामी ?
हामीले समयमानै आफ्ना कुराहरु निडरतापूर्वक, कुटनैतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्ने थियो । हाम्रा जुन तथ्यांकहरु छन्, ऐतिहासिक दस्तावेज छन्, ति दस्तावेजलाई अगाडि राखेर भारतसँग छलफल गर्नुपथ्र्यो र यसको समाधान निकाल्नु पथ्र्यो ।
हामीले त्यसलाई के ग¥यौ भने नेक्लिजेन्सी ग¥यौ । त्यसको परिणाम आज लिपुलेक हाम्रो नक्सामा रहन सकेन । भारतले आफ्नो राजनैतिक नक्साभित्र पारेको अवस्था छ । यस्तो अहिले पनि के हो भने नेपालका नेपाली जनता नेपाल सरकारको पक्षमा छन् ।
राष्ट्रियताको पक्षमा छन् । आफ्नो जमिन एक इन्च पनि छोड्न चाहदैनन् र छोड्न पनि हुन्न । भारतसँग हामीले टेबलमा वार्ता गर्नुपर्छ र हाम्रा ऐतिहासिक दस्तावेज सहित हाम्रा प्रमाणहरु लिएर यो हाम्रो भूमि हो । भारतले छिमेकी देशसँग यस्तो हस्तक्षेप गर्ने तरिका त्यति राम्रो होईन ।
तर भारतीय पक्षले बारम्बार भन्दै आएको छ नि, नयाँ नक्सामा नेपालको सीमा फेरेका छैनौं भनेर, तपाईलाई के लाग्छ ?
भारतले नक्सा फेरेको छैनौ भनेपनि पुरानो नक्सालाई र अहिलेको नक्सालाई दाँजेर हेर्दा अन्तर देखिन्छ । सामान्य तपाई हामी जो कोहीले पनि छुट्याउन सक्छ भने त्यसका विज्ञहरुले के भन्छन्, त्यसलाई पनि हामीले लिन जरुरी छ ।
तपाई सुदुरपश्चिमको नेता भएका कारण त्यहाँको जनताहरुको भनाईहरु यहाँलाई अवगतनै होला के भन्छन् त सुदुरपश्चिमाञ्चलका जनता ?
जनताको प्रतिक्रिया राष्ट्रियताको पक्षमा छ । हाम्रो जमिनमा हस्तक्षेप गर्न हुन्न भारतले छोड्नुपर्छ भन्ने छ । नेपाल सरकारले जनताको मर्मलाई राष्ट्रियताको मर्मलाई सम्मान गर्नुपर्छ र भारतले पनि त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ ।
उसले एउटा असल मित्रको हैसियतले गर्नुपर्ने व्यवहार छिमेकीसँग गर्नुपर्छ । उसले जुन नक्सा अगाडि ल्याएको छ त्यो नक्सालाई सच्याउनुपर्छ । सहज बनाउनुपर्छ । सँधै यही कुरालाई बल्झाइ रहनु हुँदैन ।
त्यसोभए भारत पक्षले उक्त नक्सा सच्याउन तयार होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
मैले चिनेको भारत, मैले बुझेको भारत के हो भने हामीलेनै हाम्रो पक्षबाट कहिले पनि दृढतापूर्वक हाम्रो पक्षमा कुरा राख्न सकेनौं । हामीले कहिन कहि उसलाई धेरै ठूलो देख्यौ र सहि कुरामा ठूलो र सानो हुन्न । आफ्नो पक्षलाई दृढतापूर्वक राखेनौं ।
आफ्नो न्यायिक कुरा जे हो त्यो कुरालाई हाम्रो पक्ष यो हो, यि हाम्रा प्रमाणहरु हुन भनेर नराख्दाखेरी यि चिजहरु सानो कुरा त हो भनेर जे गरियो त्यसले गर्दा आज त्यस्तो परिणाम देखा परेको छ । अर्को कुरा हामीले सडकमा बढि प्रदर्शन ग¥यौ ।
त्यसलाई राजनीतिक रुपमा आ–आफ्नो ठाउँमा एउटा तरङ्ग फैलाएर जनताको भावनालाई समेट्ने कोसिस गरेनांै । वास्तविकता के हो भने हामीले कुटनीतिक माध्यमबाट जे गर्नुपथ्र्यो, त्यो गरेनौं ।
कुटनीतिक लेभलमा तपाईहरु किन कमजोर हुनुभयो त ? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भन्न किन सकिरहनु भएको छैन ?
हिजोको दिनमा १९६२ मा भारतले कालापानीमा सेना राखेको थियो । त्यतिबेला नै हामीले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुपथ्र्यो र आफ्नो भूमिबाट भारतीय सेनालाई हटाउनुपथ्र्यो । त्यहाँ हाम्रो सुरक्षा पोष्ट निकाय राख्नुपथ्र्यो जुन अहिले पनि भएको छैन ।
मैले समय समयमा त्यो विषयमा कुरा राखेको थिए । तपाईलाई थाहा नै होला । चिन र भारतको बीचमा विशेषगरी २०७२ मा भएको थियो । जुन द्धिदेशीय सम्झौता भयो । सी जिनपिङ र मोदीकोबीचमा त्यतिबेला पनि मैले विभिन्न ठाउँबाट सञ्चार माध्यमबाट आवाज उठाएको थिए । मेरो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन । त्यो नलिनु कमजोरी हो र अब चाही हामीले हाम्रो भूमिलाई फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
अहिलेको अवस्थामा त्यति सजिलै रुपमा भारतले कालापानी नेपाललाई फिर्ता गर्ला जस्तो लाग्छ, तपाई कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
देला, नदेला भन्ने प्रश्ननै होइन । हाम्रो भूमि उसले छोड्नुपर्छ । हिजोको दिनमा कसैले नगरेको हुनाले नै अब गर्नुप¥यो । हिजोको दिनमा गरेको भए आज यो समस्या नै आउँदैनथ्यो । हिजोका दिनमा गरेनन् र आज पनि नगर्ने भन्ने कुरै होइन । अब गर्नुप¥यो । भारतसँग हामीले हाम्रो पक्ष राख्नुप¥यो । त्यसपछि के प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने कुरानै हो ।
जब कुरा नै नराखी त्यसै विरोध गरेर मात्रै केही हुँदैन । हामीले हाम्रो पक्ष राखे की राखेनौं हाम्रा ऐतिहासिक दस्तावेजहरु राखेकी राखेनम । हाम्रो भूगोल यहाँसम्म हो भन्ने वार्तामा बस्यौ कि बसेनौं भन्ने कुरा मुख्य प्रश्न त्यो हो । हामीले भारतलाई धेरै ठूलो देख्नुपर्ने कुरा त छदै छैन ।
तपाईहरु उतिबेलानै कालापानी गएर खुकुरी देखाएर कालापानी फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरु नै जानुभएको होईन, खोई त फिर्ता गर्न सक्नु भएन् ?
मलाई लाग्छ हामीले त्यतिबेला जे ग¥यौ त्यहाँ जाँदा समस्या झन् बल्झिएको हो । त्यो समाधानतिर नगएर हामीले गर्ने भनेको कुटनीतिक माध्यमलाई नै पकड्नुपर्छ । हामी आज शक्तिशाली देशको रुपमा अगाडि आएका छौं ।
आर्थिक रुपमा छैठौं बलियो देशको रुपमा आएका छौं भने हामीले अगाडि बढाउने भनेको कुटनीतिक माध्यमबाट नै हो हाम्रा कुराहरु राख्ने । हामीले बल प्रयोग गरेका छौं कि छैनौं ? हामीले बलसाथ गएका छौं कि छैनौं भन्ने कुरा हो नि त टेबुलमा वार्ता गर्ने, जहाँ पनि हामीले हे¥यौ भने कुटनीतिक माध्यमबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरु हल भएका छन् । समस्या समाधान भएका छन् । भारतले नमान्नुपर्ने कारण नै देखिन्न ।
भारतले नमान्ने कारण नै छैन भनेर तपाईले भनिरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्रीले सबै सीमाको समस्या समाधान गर्छु भन्दा त्यो बेला तपाईहरु के हेरेर बस्नुभएको थियो ?
हाम्रा शिर्ष नेता प्रधानमन्त्रीहरुले गर्नु भएन भन्नु भन्ने कुरा छोडौं । मोदीले स्पष्ट रुपमा हामी समाधान गर्छौ भनेपछि त्यसपछि हामीले इपीजीको गठन ग¥यौ । त्यसले आफ्नो प्रतिवेदनहरु बुझायो । अहिले पनि भारत सरकारले त्यो बुझेको छैन ।
हामीले त्यतापटी पहल ग¥यौ भन्ने कुरा हो । अब चाँही हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी जानुपर्छ । जे समस्या आएको छ त्यसलाई हामीले मानसिक रुपमा मनोवैज्ञानिक रुपमा र हामीले अध्ययन गरेर राम्रोसँग हाम्रो टिमले वार्ता अगाडि बढाउनुपर्छ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नेतृत्वले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा राख्न सक्नुप¥यो । त्यो कुरा राख्न के–को हिच्किचाहट छ ?
हालै भारतीय विदेशमन्त्रीले नेपाल–भारत सम्बन्ध बिगार्न कुल्सित तत्वहरु लागेका छन् भनेर भन्नुभएको छ नि तपाईक के भन्नुहुन्छ ?
कुल्सित तत्व लागेको छ भने पहिला भारतले गम्भीरतापूर्वक के लिन जरुरी छ भने नेपाली जनताले जे कुरा उठाएका छन् । नेपालले जे कुरा उठाएको छ, उसका प्रमाणहरुले जे देखाएको छ, त्यो कुरामा उसले चाँही गम्भीरतापूर्वक लिने कि नलिने ? कुल्सित तत्वले सम्बन्ध बिगार्न खोजेर बिग्रने होइन नि । वास्तविक सत्य कुरा के हो त्यसलाई भारत सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।
उसले पनि नेपाली जनताको भावनालाई, मर्मलाई, राष्ट्रियतालाई, सार्वभौमतालाई कदर गर्न जरुरी छ । सम्मान गर्न जरुरी छ । झन मुलुकले त झुक्न जरुरी छ । फल लागेको वृक्ष त झुकेको छ । नेपालका समस्या के हुन् त्यो जानेर आउन जरुरी छ । दक्षिण एसियाको कुनै पनि मुलुकसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध छैन । उसको चरित्र के हो भन्ने त प्रत्यक्षित हुन्छ नि त ?
त्यही भएर भारतले आत्मसमिक्षा गर्न जरुरी छ । नेपाली जनताको राष्ट्रियता भन्ने कुरा एकदमै संवेदनशील भावनासँग आत्मासँग जोडिएको प्रश्न भएको हुनाले जे भारतले ग¥यो त्यो देखेर स्वभाविक रुपमा जनताहरु सडकमा आएका छन् ।
मैले अहिले पनि के भन्छु भने सडक भन्दा पनि हाम्रो सरकार छ, हाम्रो पार्टी बहुमतमा छ । जनतासँग हामी जोडिएका छौं, त्यो भावनालाई हामीले कुटनैतिक माध्यमबाट जानुपर्छ र पार्टी कार्यकर्ताहरुले पनि तेतृत्वलाई पार्टीमा हामीले हाम्रो समस्या हल गर भनेर जवाफ दिन जरुरी छन् ।
नेतृत्वलाई नेतृत्वले बुझेको पनि छ । जे आएको छ ति दृढतापूर्वक आएको छ । ामी धेरै चोटी सडकमा गएका छौं । ठाउँ ठाउँमा हामीले नारा लगाएका छौं । त्यसले समस्या झन बल्झिएको छ । हामीले सडकमा जाने भन्दा कुटनीतिक माध्यमबाट जानुपर्छ । हामीसँग एउटा च्यानल छ । राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताहरु छन्, त्यो आधारमा हामीले जानुपर्छ । टेबुलबाट नै हामीले यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा तपाईको लोकप्रिय नयाँ बिकल्प साप्ताहिक पत्रिका मार्फत् अहिलेको जल्दोबल्दो विषयमा विचार राखेर मेरा भनाईहरु पत्रिकाका पाठक वर्गहरुमा पु¥याइदिनु भएकोमा पत्रिका परिवारलाई विशष धन्यवाद ।
२०७६ कार्तिक २५, ०७: ०६: ११